केटिएमको सस्तो एडभेन्चर बाइक ‘२५० एड्भेन्चर’ आजबाट नेपाली बजारमा बिक्री सुरु ! यस्तो छ मुल्य….. – SUDUR MEDIA
March 18, 2021 AdminLeaveaComment on केटिएमको सस्तो एडभेन्चर बाइक ‘२५० एड्भेन्चर’ आजबाट नेपाली बजारमा बिक्री सुरु ! यस्तो छ मुल्य…..
काठमाडौं । नेपालमा उपलब्ध प्रिमियम मोटरसाइकलहरु मध्ये युवाहरुले रुचाएका मोटरसाइकल हो केटीएम । केटीएमको नेकेट बाइकहरु त नेपाली सडकमा गुडेको धेरै वर्ष भैसकेजी छ । तर पछिल्लो समय केटिएमले एडभेन्चर मोटरसाइकल पनि बजारमा ल्याएको छ । नेपालको लागि केटीएमको आधिकारक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले २५० एड्भेञ्चरको आजबाट नेपालमा विक्री सुरु गर्दैछ ।
यस अघि नै नेपाली बजारमा उपलब्ध ३९० एडभेन्चरको सस्तो भर्सन हो २५० एडभेन्चर । बिक्री आजबाट सुरु भएपनि हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले केहि दिनअघि नै बुकिङ खुल्ला गरेको थियो । डिजाइनमा ३९० एड्भेन्चर जस्तै भएपनि यसमा पावर भने केहि कम रहेको छ ।
२५० एड्भेञ्चरमा २४९ सीसी सिगंल सिलिन्डर, लिक्वीड कुल्ड बिएस ६ इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ९००० आरपीएममा २९.५ पीएस पावर तथा ७००० हजार आरपीएममा २४ एनएम टर्क जनेरेट गर्छ । यसमा स्लिपर क्लच र फ्युल इन्जेक्सन जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि समेत रहेको छ । ६ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको यस मोटरसाइकलले १४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रफ्तार लिन सक्छ ।
२५० एड्भेञ्चरमा अगाडी ४३ एमएम डब्ल्यूपी एपेक्स इन्र्भटेड सस्पेन्सन र पछाडी मोनोशक रहेको छ । यसमा राम्रो ब्रेकको लागि ३२० एमएम फ्रन्ट र २३० एमएम रियर डिस्क रहेको छ । १७७ किलोग्राम कुल तौल रहेको यस मोटरसाइकलको सिट हाइट भने ८५५ एमएम रहेको छ । जसले गर्दा होचो राइडरलाई भने असहज हुन सक्छ । कम्पनीले २५० एडभेन्चरको मूल्य ७ लाख ५० हजार रुपैया तोकेर विक्री सुरु गरेको छ।